विचार /ब्लग – Nepali Audio Video
‘राजनीतिक स्थायित्व’को नारा वाम गठबन्धनलाई यसपालि राम्रै फापेको भन्नुपर्छ । प्रत्यक्षतर्फ दुई-तिहाई र समानुपातिकतर्फ पनि अग्रता ऐतिहासिक छ । एमालेलाई इतिहासमै यो स्तरको सफलता हासिल भएको थिएन । ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा यो गरेर देखाए । त्यसैले ओली एमालेका सर्वाधिक सफल नेता हुन् । माओवादी.....
पुस ६, २०७४ नेपालको संविधान वा भारतकै संविधानले पनि राष्ट्रपतिलाई यो-यो अधिकार हुन्छ भनेर दिएको छैन। तर भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरू साह्रै बलिया प्रधानमन्त्री थिए। भारतको पहिलो राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादले उनको हिन्दु कानुन बिल (हिन्दु कोड बिल) स्वीकार गरेनन्। प्रधानमन्त्री नेहरू र अरूको.....
मध्यरातमा जब एक्ली युवतीले लिफ्ट मागिन् !
लिफ्टका लागि हात हल्लियो । यति राति मागिएको लिफ्टलाई बेवास्तागर्न मिल्दैन भन्नेलाग्यो । प्रायः अफिसको काम सकेर म रातको १२ बजे घर जान्थेँ । नयाँ बानेश्वरबाट कीर्तिपुरसम्मको यात्र हुन्थ्यो। त्यसदिन पनि म बबरमहल पुगेको थिएँ । जहाँ कुनै युवतीको हात हल्लियो । र, म.....
चार वटा हेलिकप्टर चढेर ओलीसहितको टोली रेलमार्गको अवलोकनमा
रसुवा, पुस ४– चीनसँगको अन्तराष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी जोड्ने सडकमार्ग र रेलमार्गको विकास तथा विस्तार गरिने भएको छ । रेलमार्ग निर्माणको बाटोको अवलोकन गर्नका लागि रसुवा आएको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको १८ सदस्यीय टोलीले चीनको केरूङबाट रसुवागढी नाका हुँदै लुम्बिनी जोड्ने रेलमार्ग.....
२८ मङि्सर २०७४, घटना नं. १ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवा भए पनि हालिमुहाली आरजु देउवाको थियो । उनले जे भन्यो त्यही हुन्थ्यो । त्यसैले फेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रधान मन्त्री हुने अवस्था आएमा देउवा नै हुन्थे । भनाइको मतलव.....
राजाबाट छोरीचेली जोगाउन होचो ढोका
उपत्यकामा नेवार समुदायका पुराना घरका मूलढोका होचा हुन्छन् । मुख्य नेवारी बस्तीका प्रवेशद्वार पनि होचै हुन्छन्। यस्ता घर र टोलभित्र प्रवेश गर्दा र निस्कँदा टाउको निहुराउनुपर्छ । मल्लकाल र त्यसअघि बनेका अधिंकाश घरको ढोका होचै हुन्छन् । नेवार समुदायका घर र टोलको मूलढोका होचो.....
वाम लहरका अभियन्ता ओली र उनका सहयात्री प्रचण्डलाई कुनै पनि प्रकारको सत्ता उन्माद देखाउने निहुँ उपलब्ध छैन धेरै बदलाव आइसकेछ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमा। एउटा समय थियो- उनलाई धेरै दौडधुप नगर्ने, हँसिमजाक र छेडखानीहरूमा आफूलाई अभ्यस्त राख्ने नेताका रूपमा पार्टीवृत्तमा चर्चा गरिन्थ्यो। यसै पनि.....
संकटमा कांग्रेसः देउवाले राजीनामा देलान् ? कांग्रेस किन हार्‍यो ? पुनर्जागरण कति सम्भव छ ?
धेरै मानिसहरुले यसलाई हतारमा गरिएको विश्लेषण ठान्न सक्छन् । तर, मतगणनाको सुरुआती रुझानले के देखाइसकेको छ भने यो चुनावमा कांग्रेसले शर्मनाक हार व्यहोर्ने र वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत पाउने पक्कापक्की जस्तै छ । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडको दाबीअनुसार पहिलो चरणमा मंसिर १० गते चुनाव.....
मतगणना सुरु हुने बितिकै डा.बाबुराम भट्टराई ले भने दल र व्यक्ति विशेषले हारे पनि लोकतन्त्रले जितोस्
काठमाण्डौ । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक तथा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बाट गोरखाको क्षेत्र नम्बर २ का प्रतक्ष्य उमेद्वार डा बाबुराम भट्टराईले आफ्नो सामाजिक संजालमा लेख्दै भने “गत वैशाखदेखि विभिन्न चरणमा हुँदैआएको स्थानीय/प्रदेश/संघीय तहको चुनावको अन्तिम शृंखला आज मंसीर २१ गते सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा हामी सबै.....
मंसिर १९, २०७४ ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटीबाट बिदा हुँदै गर्दा भनेका थिए, ‘राजदण्ड सुरक्षित राखिदिनु ।’ नेपाली समाज हिङ नभए पनि ‘हिङ बाँधेको टालो’ बोकेर बस्ने समाज हो । यसो वरपर नियालेर हेर्‍यो भने लाग्छ, राजा नभए पनि त्यही राजदण्ड प्रत्येक नेपालीले आफ्नो मस्तिष्कमा बोकेर.....